सर्वसाधारणले भर्न मिल्ने गरी यी दुई कम्पनीले निष्कासन गदैछन् आईपीओ ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › शेयरबजार › मर्चेण्ट बैंक/बिक्री प्रबन्धक
| ११:२४:०२ मा प्रकाशित
१२ माघ, काठमाडौं । भर्खरै मात्र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ८ अर्बको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । उक्त आईपीओमा अहिसम्मकै सबैभन्दा बढि आवेदन परेको थियो ।
बैंकले निष्कासन गरेको आईपीओमा १५ लाख बढि आवेदकले आवेदन दिएका थिए । बैंकले उक्त आईपीओ बाँडफाट तयारी भइरहेको र चाडै नै आईपवीओ बाँडफाँट गर्ने जनाएको छ ।
ठूलो संख्यामा आईपीओ खुलेका कारण सबैले पाउँने सम्भावना भएकाले यहि समयमा डिम्याट २ लाख बढिले खाता खोलेका हुन् । यतिबेला डिम्याट खाताको संख्या ३६ लाख बढि पुगेको सिडिएसले जनाएको छ । आम लगानीकर्ताले शेयरमा निकै चासो देखाउँन थालेका छन् । यहि समयमा विभिन्न कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्ने होडमा छन् ।
बजारमा कुन कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ् ?
यतिबेला आम लगानीकर्ता अब कुन कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गदैछ भन्दै पर्खिरहेका छन् । यहि समयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ ।
बोर्डले सिंगटी हाइड्रो कम्पनीलाई पुष २१ गते र ग्रीन लाइफ कम्पनीलाई माघ २ गते आईपीओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएको हो ।
कहिले निष्कासन गदैछन् यी दुई कम्पनीले आईपीओ ?
ग्रीन लाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले यहि माघ २३ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको । कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका १८ लाख कित्ता तथा स्थानिय बासिन्दाका लागि जारी शेयरमा बिक्री नभएको १६ लाख ८६ हजार ४०० कित्ता गरी कुल ३४ लाख ९६ हजार ४०० कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
निष्कासन गरिने कुल शेयरमध्ये १ लाख ७४ हजार ८२० कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँट गरिएको छ भने ६९ हजार ९२८ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि बाँडफाँट गरिएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले बाँकी ३२ लाख ५१ हजार ६५२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सो शेयर खरिदका लागि माघ २७ गतेसम्ममा आवेदन दिनुपर्नेछ । सो अवधिसम्ममा पूर्ण आवेदन नपरेमा फागुन ७ गतेसम्म म्याद थप गरिनेछ ।
आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । आईपीओ निष्कासनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी बी प्लस (आइएस) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले वित्तयि दायित्व पूरा गर्न उच्च जोखिममा रहेको आधार जनाउँदछ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक बिओके क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
सिंगटी हाइड्रो पावरले यतिबेलो पहिलो चरणमा आयोजना पूभावित स्थानियको लागि आईपीओ खुल्ला गरेको छ । कम्पनीले निष्कासन गरेको उक्त आईपीओ बिक्री पश्चात कम्पनीले दोस्रोचरयामा सर्वसाधारणको लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रबन्धका अनुसार यो महिना भित्र सर्वसाधारणको कम्पनीको आईपीओ निष्कासन तयारी भइरहेको छ । ‘कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावितको लागि माघ ४ गतेबाट आईपीओ बिक्री खुल्ला गरेको छौं । क्यापिटलले भन्यो, ‘पहिलो चरणको आईपीओ बाँडफाँट गरेपश्चात सर्वसाधारणको लागि दोस्रो चरणमा आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना छ ।’
कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि एक सय रुपैयाँ अंकित दरमा २९ करोड बराबरको २९ लाख कित्ता बिक्री गर्ने क्यापिटलले जनाएको छ।
सार्वजनिक निष्काशन गर्नका लागि गराइएको क्रेडिट रेटिङ्गमा केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी माइनस (आइएस) रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले समयमा नै वित्तीय दायित्व पुरा गर्ने सम्बन्धमा मध्यम रुपमा सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ।
डिम्याट खोल्नेको संख्या साढे ३४ लाख नजिक ४ दिन पहिले
दुई लघुवित्तसहित पन्ध्र कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुनको कति ? ४ दिन पहिले
अब बजारमा सीईडीबी हाईड्रोपावरको आईपीओ भर्न पाइने, २५ लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्न दियो बोर्डले अनुमति १ हप्ता पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान ४ मिनेट पहिले
पूर्व सभापति न्यौपानेको निधनमा डा.शेखरद्वारा दुःख व्यक्त ५ मिनेट पहिले
राजविराज विमानस्थल दुई साताका लागि बन्द ५ मिनेट पहिले
आज बिहानैदेखि भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्ड अवरुद्ध ७ मिनेट पहिले
जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डको बीचमा पर्ने रिम्ना र चाइना बगर ८ मिनेट पहिले
पातारासी हिमालको काखमा स्याउ बगैँचा १२ मिनेट पहिले
बाँकेमा कोरोना बिरामीका लागि शय्या अभाव १३ मिनेट पहिले
चितवनमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु २२ मिनेट पहिले
प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋणपत्र रजिष्ट्रारमा आरविवि मर्चेन्ट बैकिङ्ग २३ मिनेट पहिले
वेटरदेखि होटल मालिकसम्म बनेका कृष्ण २६ मिनेट पहिले
नेपाल समूहभित्रै विवादः नयाँ दल गठन गर्ने कि नगर्ने ? २७ मिनेट पहिले
नेप्सेमा रिलायन्स फाइनान्सको शेयरमूल्य समायोजन ३३ मिनेट पहिले
रिक्त राष्ट्रियसभा पदपूर्तिका लागि जेठ ६ गते उपनिर्वाचन १५ घण्टा पहिले
बुकिङ भएका होटल धमाधम रद्द हुन थाले २१ घण्टा पहिले
दिनदिनै संक्रमण दर बढ्दै, एकैदिन थपिए २३५१ जना संक्रमित २ दिन पहिले
अब विदेशबाट आउनेलाई १० दिन एकान्तबासमा राखिने ४ हप्ता पहिले
नेपालमा कोरोनाकाे नयाँ स्वरुप, सतर्कता अपनाउन विज्ञकाे सुझाव २ हप्ता पहिले
सिटी स्पेशलिटी हेल्थ क्लिनिकद्वारा शनिबार बाथरोग, मधुमेह, थाइराइड र मिगौलाको निःशुल्क परीक्षण ३ हप्ता पहिले
गण्डकीमा कोरोना संक्रमणबाट दुईको मृत्यु २ हप्ता पहिले
नेपाल–ओमान साहित्य र प्रकृतिसम्बन्धी एक वेबनार ४ हप्ता पहिले
आजदेखि मेलम्चीको पानी अनामनगर,महाँकालचौर, मीनभवन र खुमलटारमा आउने ४ हप्ता पहिले
सभामुख सापकोटाको शैलीप्रति राष्ट्रियसभा अध्यक्षको बिरोध ३ महिना पहिले
१६ करोड कमाउने इन्जिनियरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा ७ महिना पहिले